Réseau Malina 07 Jiona 2020 1360 vues
Lahatsoratra nosoratan'i Judith Rachèle Rakotovao sy Harynah Ramanantsoa (Lahatsoratra navaozina). Voatery mandoa 15000 Ar ka hatramin’ny 20 000 Ar ny mpampianatra tsirairay eo anivon’ny Fari-piadidiam-pampianarana na Circonscription Scolaire (CISCO) Mandritsara amin’ny fakana ny taratasim-bola sy hikarakarana ny antontan-taratasy. Manararaotra ny zava-misy noho ny tsy fisian’ny fanampiana avy amin’ny fanjakana sy ny halaviran-toerana ny tompon’andraikitra sasany maka an’io vola io.Manaiky tsy satry ny mpampianatra noho ny fahatahorana sao tsy ho voakarakara ny anton-taratasiny.
Tsy maintsy mandoa 15 000 Ar na 20 000 Ar ny mpampianatra iray mikarakara ny anton-taratasy amin’ny maha mpampianatra azy, ankoatry ny vola hafa lany amin’ny fikarakarana rehetra ataony. Ao amin’ny sampan-draharaha misahana ny « Ressources Humaines » eo anivon’ny Cisco Mandritsara no aloa ny vola. Tsy misy fanamarihana na rosia na fanaovana sonia ny nandoavana an’ireo vola ireo ary ampiarahina amin’ny antontan-taratasy rehetra izany. Mahatratra 83 ny mpampianatra mikarakara ny anton-taratasy ao anatin’ny iray volana.
« Fomba fanao tsy mbola fahitako ity fakam-bola atao amin’ny fikarakarana ny antontan-taratasin’ny mpampianatra eto Mandritsara ity. Vola be no alain’izy ireo kanefa raha ny fantatro, efa izay no asa hikaraman’ny fanjakana azy ireo. Tsy mahasahy manohitra ny mpampianatra fa matahotra ka lasa manaraka ny fomba fanao tsy ara-dalàna», hoy ny mpampianatra mpampiofana eo anivon’ny Centre Régional de l’Institut National de Formation Pédagogique (CRINFP) Mandritsara.
Tsy misy fanavahana fa rehefa resaka fampianarana dia mitovy avokoa. Efa nisy ny fitarainana nataon’ny mpampianatra maromaro tao Mandritsara tampon-tanàna ny taona 2018, amin’ny tsy fanekena an’ity fandoavam-bola isaky ny fikarakarana antontan-taratasy ity. Nanatona onjampeo miasa ao an-toerana izy ireo, nanao antso avo tamin’ny tompon’andraikitra hanafoanana an’io fomba io, raha ny fanazavan’ny mpanao gazety iray nandray an’ireo mpampianatra ireo tamin’izany, izay miasa amin’io onjampeo io. Nisy ny fanadihadiana nataon’ny mpiasa eo anivon’ity onjampeo ity taorian’ny fitarainana.
« Fanararaotam-pahefana ny zava-misy. Ireo mpikarakara ny taratasy sy ny karaman’ny mpampianatra eo anivon’ny Cisco no maka ny vola, izy ireo no mizarazara azy ary tsy mangaraharaha satria tsy ampahafantarina ny tompony ny lalan’ilay vola sady tsy misy porofo. Rehefa miverina amin’ny manaraka ilay mpampianatra dia mbola mandoa vola hafa indray koa. Misy amin’ireo mpampianatra manaiky ary mahasahy mandoa vola ambony mihitsy aza hikarakarana ny antontan-taratasiny sy andefasana ny tompon’andraikitra manaraka an’izany. Maro amin’ny mpampianatra kosa no tsy nifanaraka tamin’ny tompon’andraikitra fa teren’izy ireo fotsiny mba ho maromaro ny vola raisin’izy ireo rehefa maro ny mpampianatra mandoa vola», hoy ihany izy.
Ny Biraon'ny CISCO Mandritsara sy ny sorabaventy maneho fa "mangaraharaha"
Antontan-taratasy maro no karakaraina eo anivon’ny Cisco raha ho an’i Mandritsara : ny fisotroan-dronono, ny fanavaozana ny fifanarahana eo amin’ny fampianarana, ny fisondrotana grady … Herinandro eo ho eo ny faharetan’ny fikarakarana ny antontan-taratasy. Mahatratra 60 000 Ar fara fahakeliny ny fitambaran’ny vola lanin’ny mpampianatra iray amin’io fikarakarana ny antontan-taratasy io.
« Betsaka ny vola lany rehefa hikarakara antontan-taratasyizahay ary mavesatra aminay izany. Amin’ireo tompon’andraikitra ao amin’ny « Ressources humaines » avokoa no andaoavana ny vola rehetra. Efa manana fitaovana ho azy manokana izy ireo ampiasainy ao amin’ny birao. Andoavam-bola avokoa ny fampiasana an’ireo fitaovana ireo, ankoatr’ilay vola 15 000 Ar omena ny tompon’andraikitra mpikarakara. Tsy voakarakara ny anton-taratasy raha toa ka tsy manaraka an’ireo lamina napetraky ny tompon’andraikitra ireo izahay », hoy ny fanazavana nomen’ny mpampianatra iray ao amin’ny EPP Antsirabe, kaominina ambanivohitra Antsirabe, distrikan’i Mandritsara.
Misy koa fakam-bola hafa…
Tsy maintsy mandoa 500 Ar amin’ny tompon’andraikitra mpikirakira ny karama eo anivon’ny Cisco ny mpampianatra iray, izay tsy mandray ny karamany any amin’ny banky, nanomboka tamin’ny taona 2010, hakana ny taratasim-bola. Tsy misy filazana na peta-drindrina maneho an’izany, ary tsy misy taratasy na rosia omena ny mpampianatra izay mahaloa ny anjarany ho fanamarihana.
« Vao tafiditra ho mpampianatra ara-panjakana aho dia nanatona ny sampan-draharaha mpikirakira ny karama eo anivon’ny Cisco Mandritsara. Nolazain’ny tompon’andraikitra tamiko fa tsy maintsy mandoa 500 Ar aho rehefa haka ny « Bon de caisse » isam-bolana. Niezaka nanontany ny anton’izany aho fa hoe efa fomba fanao sy efa mahazatra ny mpampianatra rehetra eto Mandritsara izany. Mafy aminay ny mandoa an’io vola io na heverina ho kely aza. Tahaka ny vola omena ny tompon’andraikitra fotsiny ny fahitako an’io 500 Ar io satria voaraiko foana ny karamako na tsy mandoa aza aho, ary ampatsiahiviny ahy foana iny isaky ny miverina maka ny karamako any amin’ny biraon’ny Cisco aho amin’ny manaraka », hoy ny fanazavana nataon’ny mpampianatra eo anivon’ny EPP Andilana, ao amin’ny kaominina Ambanivohitr’Antsôha Mandritsara.
Mbola manamafy an’izany koa ny mpampianatra iray, mpampiofana eo anivon’ny CRINFP Mandritsara :
« Nambaran’ny tompon’andraikitra fa ho fanafangainana ny fahazoana ny karama no antony hakana ny 500 Ar isam-bolana, atao saran-dalan’ny olona maka « Bon de caisse » any Antsohihy. Tsy mampiova zavatra izany fa mbola isaky ny faran’ny volana hatrany ny fandraisam-bolanay, raha toa ka isaky ny faha 18 hatramin’ny 20 amin’ny volana no nieritreretanay azy ».
Mandritsara : distrika maro mpampianatra indrindra ao Sofia
Mpampianatra avokoa ny 80%n’ny mpiasam-panjakana ao anatin’ny distrikan’i Mandritsara, distrika lehibe indrindra amin’ny distrika miisa 7, mandrafitra ny faritra Sofia.185 km avy ao Antsohihy, renivohitry ny faritra no misy ny distrikan’i Mandritsara, mandalo amin’ny distrikan’i Befandriana Avaratra. Mahatratra 3700 ny isan’ny mpampianatra efa mpiasa raikitra ara-panjakana sy ny mpampianatra karamain’ny Fikambanan’ny Ray Aman-drenin’ny mpianatra (FRAM) eo anivon’ny Cisco Mandritsara, miparitaka amin’ny Zones Administratives Pédagogiques (ZAP) miisa 32. Noho ny tsy fisian’ny fanampiana avy amin’ny fanjakana foibe sy ny halaviran-dalana no anton’ny fakana vola amin’ny mpampianatra amin’ny fikarakarana ny antontan-taratasy hoy ny tompon’andraikitra eo anivon’ny Cisco Mandritsara. Matahotra ireo mpampianatra ireo sao tsy ho voakarakara ny antontan-taratasiny ka nanararaotra nametraka io lamina tsy ara-dalàna io ny tompon’andraikitra. Raha ny fanazavan’ny lehiben’ny fari-piadidiam-pampianarana na Cisco Mandritsara, Indriantsifera Radison Zaralahy, misy tambin-karama sy saran-dalana avy amin’ny fanjakana omena ny mpiasa amin’ny fikarakarana ny antontan-taratasin’ny mpampianatra manerana ny nosy, izay tsy tonga ara-potoana fa ny vola natao hanodinan-draharaha amin’ny ankapobeny dia efa ela no tsy nisy intsony.
« Tsy manana fitokisana amin’ny vola omen’ny fanjakana ny mpiasa mpikarakara ny antontan-taratasy eto aminay noho ny fahataran’ny fivoahan’izany efa amam-bolana maro aty aoriana. Raha maniraka azy dia takiany mialoha ny tambin-karama sy ny saran-dalana ary ny sakafo eny an-dalana sy ny hotely vao manaiky izy. Tsy manana vola natokana ho amin’izany anefa ny Cisco eto Mandritsara. Izay angamba no heveriko fa nahatonga ny fakana vola amin’ny mpampianatra manana antontan-taratasy karakaraina io. Ary nampalaky ny fikarakarana tokoa ny fandefasana misonera mankany Antsohihy sy Antananarivo.Vetivety dia mivaly ny fangatahana, afa-po ny rehetra. Lasa fahazaran’ny mpampianatra arak’izany ny fomba fiasa taty aoriana fa tsy fantatro hoe iza no nametra azy io ho 15 000 Ar hatramin’ny 20 000 Ar fa tena nisy tokoa ny fandoavam-bola nataon’ny tompon’ny antontan-taratasy », hoy ny fanazavany.
Anisany nahazo fiofanana sy fanabeazana momba ny ady amin’ny kolikoly ny sehatry ny fanabeazana ka anisan’izany nisitraka an’izany ny Cisco Mandritsara. Mbola mipetraka eo amin’ny birao ny peta-drindrina amin’ny fanentanana ny rehetra mba hanao ny asany ao anatin’ny fangaraharahana.
« Rehefa betsaka ny olona voarohirohy sy niditra am-ponja noho ny fanaovana kolikoly sy fakam-bola tsy ara-dalàna tamin’ity fitondrana vaovao ity dia nasaiko natsahatry ny tompon’andraikitra ato aminay io fakana vola amin’ny fikarakarana antontan-taratasin’ny mpampianatra eto Mandritsara io, efa tsy nisy intsony izany nanomboka tamin’ny roa volana lasa izay», hoy hatrany ny fanazavan’ny sefo Cisco Mandritsara.
Nanamafy ity tompon’andraikitra ity fa betsaka ny tsy mahazaka ny vola takian’ny misionera amin’ny fikarakarana ny antontan-taratasy, efa nisy ny fangatahana fanafoanana azy io izay niafara tamin’ny korontana nataon’ny mpampianatra. Nanatona onjampeo nilaza ny zava-nisy ny mpitokona. Tranga niseho vao tsy ela tamin’ity taona 2019, anisany nanosika azy handray fanapahan-kevitra ny hampitsahatra an’izany hoy izy ny fitarainan’ny mpampianatra misotro ronono tamin’ny fikarakarana ny fanavaozana ny fahazoana tambin-karama amin’ny fisotroan-dronono farany teo.
Nilaza koa ity sefo Cisco ao Mandritsara ity fa betsaka ny fitarainana voarainy momba ny fakana vola ataon’ny mpikarakara ny famoaham-bola any Antsohihy amin’ireo mpampianatra, ho an’izay mandeha mivantana any. Ireny indray koa no manosika ny mpampianatra sasany manaiky ny fandaminana amin’ny misionera eo anivon’ny Cisco Mandritsara ity mba ho fampihenana ny vola mivoaka. Tsy mbola nisy mpampianatra tsy nandray karama raha eto anivon’ny Cisco Mandritsara hoy ihany izy.
« Ny vahaoana noraisiko dia mandray ny laharan’ny antonta-taratasy aho ary mampanantena an’ireo mpampianatra fa hanaraka ny antontan-taratasin’izy ireo amin’ny alalan’ny fifampiresahana amin’ny tompon’andraikitra mivantana mba hampalakilaky ny asa, mba hialana amin’ity fakana vola tsy ara-dalàna ity. Manahy anefa aho fa tsy maintsy ho tafaverina foana io fomba tsy ara-dalàna io tsy hoe ela satria efa samy zatra ny andaniny sy ny ankilany ».
Efa nisy hoy izy ny fanaovana tatitra tany amin’ny tompon’andraikitra eo anivo’ny foibem-paritry ny fanabeazam-pirenena na Direction Régionale de l’Education Nationale (DREN) Sofia momba ity zava-misy ity. Araka ny fifampiresahana tamin’ny tale, Rakotovao Razafimandimby, efa nahazo fitarainana momba an’ity fakam-bola ataon’ny mpikarakara ny antontan-taratasin’ny mpampianatra eo anivon’ny Cisco Mandritsara ity izy ny taona 2018. Efa nisy ny fidinana ifotony sy ny fakana am-bavany an’ireo mpampianatra tamin’izay. Nambarany mazava tamin’ny tompon’andraikitra rehetra hoy izy fa maimaim-poana ny fikarakarana ny antontan-taratasy sy ny asa atao momba ny fampianarana. Tsy marina ihany koa hoy izy ny filazana fa maka vola ny tompon’andraikitra amin’ny famoaham-bola ao Antsohihy. Ho an’ny lehiben’ny distrika sy ny ben’ny tanànan’i Mandritsara, samy nilaza izy ireo fa tsy mbola nahazo fitarainana momba ny kolikoly sy ny fanararaotana ataon’ny tompon’andraikitra eo anivon’ny fampianarana. Nambaran’ny lehiben’ny distrikan’i Mandritsara Léon Fulgence fa tsy ekena ny fanaovana kolikoly amin’ny faritra iadidiany. Ary mampiantso ny tompon’andraikitra avy hatrany izy raha maheno fitarainana momba izany amin’ny maha tompon’andraikitra ara-panjakana azy voalohany.
Mitohy ny fakana vola tsy ara-dalàna
Mahafantatra ny fomba fiasan’ny mpikarakara ny taratasin’ny mpampianatra eo anivon’ny Cisco avokoa ny ankamaroan’ny mpanolotsai-pampianarana sy ny sefo ZAP ao Mandritsara. Izy ireny no manoro lalana sy mampahafantatra ny tokony atao an’ireo mpampianatra any faritra iadidiany amin’ny fikarakarana rehetra ilainy. Araka ny fanadihadiana natao ihany koa, tsy marina ny filazana nataon’ny sefo Cisco Mandritsara fa efa tsy misy ny fakana vola ataon’ny tompon’andraikitra sasany amin’ny fikarakarana ny anton-taratasin’ny mpampianatra. Mizara samy manana ny heviny fotsiny ny mpampianatra, ao ny mahita fa tsy ara-dalàna io fakam-bola io, ao kosa ireo manohana ny fomba fanao noho ny fiheverana fa mampalakilaky ny fanatanterahana ny asa izany. Raha ny nambaran’ny sefo ZAP ao amin’ny kaominina ambanivohitra Antsirabe, Denis Razarafeno, noho ny hamaroan’ny mpampianatra eo anivon’ity Cisco Mandritsara ity, misy isanandro ny mpampianatra mikarakara antontan-taratasy isan-karazany. Izay no nampanita-tsaina ny tompon’andraikitra namorona ny misionera.
« Ireo tompon’andraikitra mikarakara ny antontan-taratasy eo anivon’ny Cisco ihany no mifandamina amin’ny fandehanana any Antsohihy sy Antananarivo hikarakara ny antontan-taratasin’ireo mpampianatra. Nambaran’izy ireo fa lavitra ny lalana ary mila arahina akaiky ny antontan-taratasy vao vita. Mbola mitohy ny fakana vola amin’ny mpampianatra momba izany hatramin’izao ».
Raha ho an’ny mpampianatra sasany amin’ity kaominina ambanivohitra Antsirabe, distrikan’i Mandritsara ity, mahita izy ireo fa mampalaky ny fivoahan’ny fangatahana ataon’ny mpampianatra amin’ny asany ny fomba fiasa amin’ny ankapobeny, fa tokony asiana fifanarahana tsara amin’ny mpampianatra ny fanatanterahana azy ary tokony atao mangaraharaha. « Maro loatra raha 15 000 Ar na 20 000 Ar no efaina amin’ny fikarakarana antontan-taratasy iray. Efa karamain’ny fanjakana manko izy ireo amin’io asany io ka tsy tokony haka vola hafa, ankoatry ny vola tena ilaina amin’ny antontan-taratasy », hoy ny fanazavan’ny mpampianatra iray ao amin’ny EPP Antsirabe Mandritsara.
Fampiasana fitaovana ho an’ny tenany manokana
Efa mampiasa solosaina ny mpiasa mikirakira ny taratasin’ny mpampianatra eo anivon’ny Cisco Mandritsara, mbola misy ihany koa ny mampiasa ireo fitaovana teo aloha, toy ny milina fanoratana, amin’ny birao hafa. Efa tsy voatery mandeha any ivelany intsony ny mampianatra raha hikarakara ny antontan-taratasy sy mila dika mitovy fa efa vita eo anivon’ny Cisco avokoa. Fitaovana manokana ho an’ny mpiasa ireo solosaina amin’ny endriny vaovao sy raitra ireo fa ny tranainy no fitaovan’ny Cisco ary efa tsy mandeha avokoa ny ankamaroany. Avo roa heny amin’ny sarany any ivelany ny fanaovana dika mitovy sy famoahana taratasy ary fanoratana amin’ireo tompon’andraikitra. Anisany mampitombo ny vola lanin’ny mpampianatra iray amin’ny fikarakarana ny antontan-taratasiny izany. Maro amin’ny antontan-taratasy ilaina ihany koa no tsy hita sy tsy misy raha tsy ao amin’ireo tompon’andraikitra ireo ao ihany. Nanazava hatrany ny mpampianatra iray avy amin’ny EPP kaominina ambanivohitra Antsirabe Mandritsara fa ahazoany tombony maro ny vola efain’ny mpampianatra amin’ny fikarakarana ny antontan-taratasy matoa nanana finiavana nividy fitaovana ho azy manokana ampiasainy amin’ny raharaham-panjakana mihitsy ireo tompon’andraikitra. Tsy isanandro anefa ny fividianana fitaovana hoy izy ka anisany antony tokony hampihenana ny vola alain’izy ireo amin’ny mpampianatra izany.
Ireo tompon’andraikitra ihany no misionera
Miisa telo ireo mpiasa misahana ny fikarakarana ny antontan-taratasin’ny mpampianatra ao amin’ny sampan-draharaha « Ressources Humaines » eo anivon’ny Cisco Mandritsara. Izy ireo ihany koa no mifandimby manao misionera mitondra ny antontan-taratasin’ny mpampianatra karakaraina. 15 000 Ar ny saran’ny antontan-taratasy raha mankany Antsohihy, 20 000 Ar kosa raha any Antananarivo. Tsy misy soratra na peta-drindrina manoro ny tokony hatao sy manambara izany, fa raha misy mpampianatra hikarakara ny antontan-taratasiny ka mila fanampim-panazavana vao ambara izany. 83 ka hatramin’ny 100 isam-bolana ny antontan-taratasy voarain’izy ireo. Nanomboka tamin’ny 2016 ny fandoavam-bola, izay mandoa vola ihany no entin’izy ireo, afaka mitondra ny antontan-taratasiny kosa izay manana fahafahana afaka miala tanàna hikarakara ny azy manokana. Nanamarina ny maha azy ireo ny fitaovana ampiasainy ao amin’ny Cisco ireo mpiasa. Samy mampiasa ny azy tsirairay ary samy manangona ny volany izy ireo. Efa samy manana ny mpanjifany ihany koa.Manatona avy hatrany an’izay mpiasa fantany amin’izy telo ireo ny mpampianatra rehefa hikarakara antontan-taratasy. Efa samy mifampilaza ny mpampianatra efa zatra amin’io fomba io. Ireo vaovao kosa dia ifandimbiasana ny fandraisana azy ireo mba hitovy ny fizarana.
« Noho ny fahatsapanay fa tsy mandeha ny raharaham-panjakana raha toa ka tsy mitady hevitra izahay, no anton’izao fakana vola amin’ny mpampianatra izao mba hikarakarana ny antontan-taratasiny.Ampiasainay atao saran-dalana sy sakafo ary hofan’ny fiantranoana ny vola alainay. Izahay kosa tsy hianto-tena amin’ny asam-panjakana fa tsy maintsy ireo tompon’ny antontan-taratasy no asainay miantoka ny lany rehetra. Efa tsy mandeha avokoa ny fitaovam-panjakana ary finiavana nataonay manokana ny nitondranay fitaovana avy any an-tranonay hanatanterahana ny asa. Azonay atao tsara ny tsy mitondra azy ireto satria fanananay manokana tokony hipetraka any an-tranonay kanefa maro ireo mpampianatra mitaraina fa mikatso ny asa dia izay no antony », hoy Gilbert, tompon’andraikitra ao amin’ny « Ressorces Humaines », eo anivon’ny Cisco Mandritsara.
Nanamafy izy fa mbola mitohy hatramin’izao ny fanaovana an’izany fa efa miparitaka sy fantatry ny mpampianatra rehetra ka sarotra ialana:
« Tamin’ny taon-dasa, nisy andian’ny mpampianatra tsy nanaiky an’ity fomba fiasa ity ka nitokona sy nanao fitarainana. Nitory anay hatrany amin’ny onjameo izy ireo tamin’izay. Noentinay nody avokoa ny fitaovanay ary ny fitaovam-panjakana teo am-pelatananay no nampiasaina. Tsapanay ny fijaliana tamin’ny tsy fisian’ny fitaovana tamin’izay ary maro ny mampianatra nanatona anay sy niangavy anay mba hamerina an’izany ho fampandehanana ny asa. Tsy te hanefa vola ny mpampianatra sasany fa tiany atao maimaim-poana ny asa rehetra kanefa tsy mety aminay izany».
Raha no momba ny 500 Ar aloa amin’ny fakana ny taratasim-bola, nanazava ny ao amin’ny sampan-draharahan’ny vola, Pierre Michel fa atambatra atao saran-dalan’ny olona maka ny taratasim-bola any Antsohihy ireo vola ireo. Betsaka hoy izy ny mpampianatra minia tsy mandoa ny azy kanefa mahazo ny karamany ihany. Misy koa ny mpampianatra tsy manisy olana ny amin’ny fandoavam-bola, na eo amin’ny fakana taratasim-bola izany, na amin’ny fandoavana vola amin’ny fikarakarana ny antontan-taratasy. Matahotra ny ankamaroan’ny mpampianatra sao tsy ho voakarakara ny antontan-taratasin’izy ireo ka vao manampy trotraka ny fahasahiranana. Maro amin’ny mpampianatra no efa ela niasana amin’ny toerana iray eo anivon’ny Cisco Mandritsara, tsy mahazo famindran-toerana sy efa mahazatra ny mpianatra sy ny ray aman-dreny. Matahotra izy ireo sao hisy fiantraikany amin’ny asany andavanandro ny tsy fanekena ny fandaminana sy izay takian’ny tompon’andraikitra eo anivon’ny fampianarana.
"Ny vahaolana dia ny fiverenan’ny Fanjakana manome indray ny tetibola iasana isaky ny Cisco, amin’ny alalan’ny ministeran’ny Fanabeazana, hooy ny lehiben’ny Cisco ao Mandritsara, Indriantsifera Radison Zaralahy. «Mitarika fakampanahy ny zava-misy", hoy izy, "kanefa ny asan’ny Fanjakana tst maintsyhatao. Tokony miara-miasa ny sokajy rehetra : ny mpampianatra, ny tomponandraikitra sy ny aio amin’ny Cisco. Ireo no miray hina mametraka fitarainana eny amin’ny Talemparitrin’ny Fanabeazana ao Sofia. Ity farany kosa mampakatra ny fitarainana any amin’ny ambaratonga ambony."
Lahatsoratra niivoaka ny 24 oktobra 2019/Fanavaozana farany : 7 jona 2020